समाजको एउटा पंक्ति अपमान र घृणाको हतियार उध्याएर निरन्तर उनीविरुद्ध खनिएको छ । र त्यो पंक्तिलाई अहिलेफेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्रविधि सञ्जालको उपयोग गरेर हिंसक प्रतिक्रिया गर्न झनै सहज भएको छ । कतिसम्म भने उनलाई यस्तैमध्येका मानिसहरू घिनलाग्दा गाली मात्रै गर्दैनन्, बलात्कारको धम्कीसमेत दिन्छन् ।
कतिपय मेरा मित्र सामाजिक सञ्जालमा मलाईबहस आमन्त्रक र प्रतिक्रियात्मक होइन, शालीन र ‘सबैको साझा’ कविका रूपमा देखिन सुझाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्— एक लेखकका रूपमा, सामाजिक कर्ताका रूपमा वा सचेत महिलाका रूपमा मेरो छवि विवादित र कुनै ‘पक्षधर’ हुनु हुँदैन । कतिपय आफन्त भन्छन्— विचार र पक्षधरताको ठेक्का लिनुपर्ने तँ को होस् ?
तीन वर्षअघि तीज पर्वबारे मैले लेखेको स्टाटसमा टिप्पणी दिँदै एक ‘वरिष्ठ’ लेखकले नै मलाई सामाजिक व्यक्ति र असल आमा बन्नुपर्ने सुझावसहित ‘डन्ट बी सोसल पुलिस !’ भनेर चेतावनी दिए । स्त्री–गरिमाविरोधी र भड्किलो तीजलाई कसरी सिर्जनात्मक बनाउन सकिएला ? मेरो धारणा यसैको वरिपरि थियो । आफूलेसम्मान गर्दै आएका एक लेखकले त्यस्तो घोर विवेकविरोधी धम्की दिएको देख्दा मलाई पक्का भएकै हो, वर्गीय समाजमा लेखक पनि वर्गीय हुन्छ भनेको साँच्चै रहेछ ।
जसरी घर र समाजमा महिला निरन्तर अपमानित र लाञ्छित छन्, सामाजिक संवादका मञ्चहरूमा त्यसको हुबहु रूप देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर आदिमा महिलाको उँचो स्वर किन मन पराइँदैन भन्ने कुराको उत्तर समाजको संरचनात्मक हिंसाको भाष्यसँगै जोडिन्छ । दृढ र निश्चिन्त भएर अमुक महिलालेआफ्ना विचार राखिरहँदा अमुक पुरुषलाई आफ्नै घरका महिलाजनको ‘पोथी डाँको’बाट औडाहा छुटेजस्तो मनोवैज्ञानिक तनाव हुँदो हो ।
कतिपयले मेरा पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्– यसलेआफ्नो लोग्नेलाई के गर्दी हो ? यद्यपि यो मेरो अति निजी मामिला हो, स्पष्टीकरण जरुरी छैन । तथापि, प्रेम र सद्भावले ढकमक्क फक्रेको फूलबारीजस्तो गृहस्थी धानेरै म उनीहरू जस्ताको लबस्तरो चेतनासँग लडिरहेकी हुन्छु भन्ने तिनलाई के थाहा ? अन्त्यमा, सबैभन्दा पछिल्लो अनुभव सुनाउँछु ।
उनको प्रतिक्रियामा त्यही कोटिका टिप्पणीकर्तामध्ये एक बुज्रुकले लेखेका छन्, ‘यसलाई स्याङ्जाली गालीले ठोकौं ?’ मलाई लाग्छ, उत्पीडित वर्गले निहुँ खोजिरहनुपर्छ, तब न सत्ताधारी चिन्तनको वमन र दुराग्रह कुन स्तरमा छ भन्ने थाहापाइन्छ ! नभए, सामाजिक सञ्जाल स्त्रीद्वेषको कतिठूलो प्रतिविम्ब हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ज्ञानबाट म कसरी लाभान्वित हुन पाउँथेंँ ?